Madaxweynaha Jubba Axmed Madoobe oo weli ka soo horjeeda ka qayb-galka shir Muqdisho – Radio Daljir
Madaxweynaha Jubba Axmed Madoobe oo weli ka soo horjeeda ka qayb-galka shir Muqdisho
Oktoobar 21, 2013 3:23 b 0
Kismaayo, October 21, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa mar kale ku celiyey in maamulkiisa aysan ka qeyb geli doonin shirka ka dhacaya Muqdisho, kaas oo looga hadlayo arrimaha Jubbooyinka xili uu shirar kala duwan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin guuleed.
Axmed Madoobe waxaa uu sheegay in ay jiraan caqabado dhowr ah oo aan weli la xalin, waxaa uu ku celceliyey in aysan garab mari doonin heshiiskii Adis Ababa ee 28 Agoosto dhexmaray dowladda iyo maamulkiisa.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya Cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweynaha Jubba Axmed madoobe waxay shirarkii xalay iskula soo qaadeen in shirarka dib-u-heshiisiinta jubboyinka laga qayb geliyo barre Hiiraale.
Madaxweynaha Jubba iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaa la sheegayaa in ay isku afgaran waayeen in shirka dib-u-heshiisiitna uu qayb ka noqdo Col. Barre hiiraale, waxaa kaloo uu Axmed madoobe si cad u diiday in garoonka Kismaayo laga dhoofiyo Kornaylka oo horay dagaal ula galay maamulka Jubba.
Shirarka ayaa weli socda ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo aan la xiriirnay kana agdhow shirka ayaa sheegay in weli la kala fog yahay, balse la filayo natiijada kama dambaysta ?ee shirka labbada dhinac maanta gelinka dambe ama caawa.
Degmada Towfiiq oo loo dhagax dhigay saldhig boolis, suuq iyo xaruunta dowladda hoose (Dhegeyso)
Baarlamanka Kenya oo ku mashquulsan sidii loo xiri lahaa xeryaha qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab